WASIIR CAWIL WAXBA KUMUU LAHAYN SNM OO KEENTAY GUUSHA S/ GAADHAY”JIDHIF | Toggaherer's Weblog
Wasiirku (Cawil) waxba kumuu lahayn SNM oo keentay guusha Somaliland gaadhay”
Maxamed Xassan Jidhif
Hargeysa 08 March 2009 (THN)- Maxamed Xassan Cabdillaahi (Jidhif) oo ka tirsan guddiga Fulinta ee xisbiga Mucaaradka ah ee Kulmiye, ayaa sheegay in xaaladda haatan Somaliland gashay tahay marxalad adag oo u baahan in lagaga baxo wada-tashi qaran.
Mr Jidhif oo shalay u waramay Telefishanka Horn Cable, waxa uu xaalada cusub ee hadda dalku galay barbar dhigay marxaladii ay markii ugu dambaysay maraysay dawladdii Maxamed Siyaad Barre.
“Marxalada aynu maanta maraynaa waa tii aynu ogayn ee ugu dambayntii Maxamed Siyaar Barre marayay. Laakiin, haddii aanay dawladdu sidaa u fahamsanayn, annagu Kulmiye ahaan waanu fahamsanahay waxaananu goob-joog u ahayn marxalada noocan oo kale ah.” Sidaa ayuu yidhi Maxamed Xassan Cabdillaahi.
Wuxuuna intaa ku daray, in aanay jirin damaanad ay ku qancaan oo muujinaysa suurtogalnimada in Komishanka doorashooyinku muddada cusub ee ay u cayimeen ku qabtaan doorashada Madaxtooyada, maadaama ay marar hore dib u dhacyo ku yimaadeen.
“Xukuumad ama Komishan ha dhigee, dhalanteed runta ka fog qaadan mayno,” ayuu yidhi Jidhif oo la waydiiyay sababaha ay u ogolaan waayeen muddaynta cusub ee doorashada Madaxtooyada oo qabashadeeda loo qoondeeyay 31 May 2009.
“Waxaanu u aragnaa arrin faashil ah,” ayuu raaciyay. Wuxuuna Xukuumadda ku eedeeyay in ay u meel-dayayso muddo-kordhin dambe. Maxamed Cabdillaahi Xassan waxa uu sheegay in aanay masuuliyiinta Xukuumadda Madaxweyne Rayaale ku faani karin dhismaha ciidamada Somaliland, kuwaasoo uu tilmaamay in la aasaasay 1993 iyo 1997-kii, isla markaana Madaxweynihii xilligaas oo ahaa Marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal uu lahaa aasaaskooda.
“Nimanka maanta Ciidanka ku faanaya markii la dhisay midkoodna ma joogin,” ayuu yidhi. Waxa uu nasiib-daro ku tilmaamay in dhismaha ciidanka oo aasaaskoodii ay 15 sannadood ka soo wareegtay ay bilaa derejo yihiin, isla markaana aanay tayadoodu wanaagsan tahay.
Maxamed-Jidhif waxa uu beeniyay eedaymo Wasiirka Maaliyaddu u jeediyay xisbiga Kulmiye iyo ururkii SNM. “Wasiirku (Cawil) SNM waxba kumuu lahayn, SNM-na waxay keentay guusha Somaliland gaadhay,” ayuu yidhi. Wuxuuna intaa ku daray, in qofka masuulka ah aanay ku haboonayn naqdinta iyo wax-ka-sheega taariikh aanu midho-dhalinteeda waxba ku lahayn.
“Rajadii dalka annagu meel lagu wado ma garanayno…Hadalkii Madaxweyne Ku-xigeenku shaki buu na geliyay,” sidaa ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in goleyaasha Baarlamaanka looga baahanyahay inay go’aan ka gaadhaan xaaladda dalka, isla markaana ka arrinsadaan cida ay noqonayso dawladda dalka doorashada gaadhsiinaysaa. Sidoo kale, waxa uu Xukuumadda ku eedeeyay in aanay dhinacooda fulin qodobadda heshiskii ay bishii June ee sanadkii aynu soo dhaafnay ay kala saxeexdeen xisbiyada.